Ụzọ okporo ụzọ ma ọ bụ Otu esi meziwanye nchịkọta Google gị & ntan; Ọkachamara Semalt
Ụzọ okporo ụzọ bụ URL nke ndị mmadụ na-etinye na ya ozugbo ma ọ bụ site na ibe edokọbara ihe nchọgharị ha. Nchịkọta Google na usoro nchịkọta weebụ ndị ọzọ niile dabere na asụsụ HTTP nke onye isi akụkọ a maara dị ka onye nnochite anya nke na-eduga ndị ọrụ na ibe weebụ dị mkpa. Ọ bụrụ na ọnụọgụ okporo ụzọ dị elu karịa nke a tụrụ anya ya, ohere ọ bụ bụ na ndị spammers meriri akaụntụ Google Analytics gị. Ma ọ bụrụ na okporo ụzọ kpọmkwem na-egosi pasent iri nke data gị, mgbe ahụ ọ bụ ihe dị mma, na ịkwesịrị ichegbu onwe ya maka ya. Artem Abgarian, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ihe nchịkọta, kwenyere na otu n'ime ụzọ kachasị mma iji belata okporo ụzọ ziri ezi na-akpado mkpọsa gị na ịchịkwa ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Site na usoro a, a ga-ekwu na okporo ụzọ mgbasa ozi na nleta na-aga kpọmkwem bụ ebe kwesịrị ekwesị, n'agbanyeghị ebe okporo ụzọ si abịa - vaping mods box.
Gịnị bụ okporo ụzọ okporo ụzọ?
Ọ bụrụ na mmadụ debanye aha ngalaba ahụ na ihe nchọgharị ya ma jiri akara edokọbara iji nweta saịtị gị, mgbe ahụ ị ga-enweta okporo ụzọ kpọmkwem maka ijide n'aka. Ọ dị mkpa icheta na nhazi ahụ nwere ike ime n'oge ọ bụla na akaụntụ Google Analytics ga-elele ma ọ bụrụ na okporo ụzọ ziri ezi ziri ezi ma ọ bụ. Ụfọdụ ihe ndị ọzọ gụnyere:
Ịpị na njikọ email na-adabere na onye na-ahụ maka ọrụ
Na ịpị njikọ nke Microsoft Office ma ọ bụ faịlụ PDF gị
Ịnweta ebe nrụọrụ weebụ site na URL mkpirikpi
Na ịpị njikọ sitere na ngwa ngwa mgbasa ozi mkpanaka dịka Twitter na Facebook. Imirikiti ngwa ngwa ekwentị anaghị agafe ozi ntinye..
Ilele saịtị ndị na-adịghị echekwa (HTTP) na iji ha atụnyere saịtị ndị dị (https). N'ọnọdụ dị otú ahụ, ebe nchekwa gị agaghị agafe na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị nchebe.
okporo ụzọ okporo ụzọ nwere ike ịkọwa isi ihe dị iche iche, na nleta ndị a na-edekọ mgbe niile na akaụntụ Google Analytics gị.
Ntuzi maka okporo ụzọ okporo ụzọ
Ọ bụrụ na ị na-eche na okporo ụzọ gị na saịtị na-anata abụghị ihe akara ahụ, otu n'ime ụzọ iji dozie ya na-agbakwụnye sistemụ ncheta ma ọ bụ mkpado URL na mkpọsa a kapịrị ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike igbochi okporo ụzọ site na spam na-eziga site n'ịgbakwunye agbatị ndị dị mkpa iji hụ na mmemme nile site na otu mkpọsa na-egosi dịka ozi-e na akaụntụ Google Analytics.
Na-akọwa okporo ụzọ okporo ụzọ maka ndị ahịa gị
Mgbe ịchọtara na okporo ụzọ kpọmkwem na-ebili, ị ga-akọwara ndị ahịa gị ihe atụ kwesịrị ekwesị. Kọwaa eziokwu na eziokwu sitere na isi iyi ọ bụla nwere ike ịkwụsị na bọket ziri ezi. Ịkwesịrị ịkọwapụta ihe dị iche iche dị iche iche nke nwere ike ịkpata Direct, dịka ozi-e, search engine s ma ọ bụ backlinks na weebụsaịtị https. Ohere bụ na ozi a ga-eme ka onye ahịa gị ghara inwe obi ụtọ, mana ị gaghị aghọ aghụghọ na onye ọ bụla kwesịrị ịṅa ntị na inweta ọnụọgụ ahịa sitere na Google, Bing, na Yahoo.
Ọ bụ eziokwu na okporo ụzọ ziri ezi bụ ọbụbụ ọnụ maka ọkachamara nchịkọta. Ma ị nwere ike ịme ihe ndị kwesịrị ekwesị iji dozie nsogbu a ma nwee ike imeju ndị ahịa gị n'ụzọ ka mma. Jide n'aka na ị na-enyocha akaụntụ Google Analytics mgbe niile ma na-elekwasị anya na ụzọ okporo ụzọ.